8-da sawir ee ugu xiisaha badan taariikhda | Abuurista khadka tooska ah
Adduunyada sawir qaadista waxay na siisaa sawirro yaab leh, laakiin had iyo jeer ma hayaan sharraxaad caqli gal ah. Tani waa waxa ku dhaca sawirradan. Iyagu qiimo uma lahan astaamahooda qurxinta ama fulinta weyn ee sawir qaadaha, haddii aysan ahayn taariikhda ay gadaal kaga gabanayaan, miisaanka tabta ee ay ku dhejiyeen aragtida dhammaantood. Sawirradan ayaa dunida ka dhigay kuwo gariira oo raadiya sharaxaad ka soo baxda xirfadlayaasha muuqaalka iyo saynisyahannada maskaxda badan. Ilaa maantadan la joogo waxay ahaanayaan qarsoon daa'in adduunkeena. Ruuxyada, UFOs, waqtiga safrayaasha ... Waxay umuuqataa waalli run ah, laakiin runtu waxay tahay in waxkastoo sawiradu yihiin, ay saameyn badan yeeshaan.
Miyaad u maleyneysaa inay ku saabsan tahay montages ama qaladaad? Noo sheeg sida aad u aragto sawirradan!
In kabadan hal jeer ayaa la yidhi waxaa jira shay ku meeraysta meeraheena. Shaygan ayaa loo yaqaan "Black Knight", waxaa la ogaadey markii ugu horeysey 1927 xaqiiqdii weli wey jirtaa. Wax badan baa laga sheegay shaygan mala awaal badan baa la sameeyay. Kuwo badan waxay yiraahdaan shaqadeedu waa inay u dirto calaamado qaybaha kale ee koonkan oo ku saabsan waxqabadkeenna. Cajiib.
Sannadkii 1967 Stefan Michalak, wuxuu si cad u sheegay inuu xiriir la lahaa dadyow ka baxsan dunida gaar ahaanna UFO illaa uu qarxay iftiinka oo uu uga tagay waxyaalahan dahsoon calaamadaha laabta ilaa nolosha. Qofna kuma guuleysan inuu helo sharraxaad caqli gal ah (xitaa xitaa dhakhaatiirta falanqeeyay goobahan xiisaha leh) waxayna noqotay kiis khuraafaad ah oo ku saabsan cilmiga ufolojiga adduunka oo dhan.
Muddo ayey nagu qaadatay inaan xusno meeraha ugu caansan ee loo yaqaan cosmos, saaxiibkeen Marte. Waxay leedahay qaabkan la yaabka leh ee ku jira gargaarkeeda kaasoo u eg muuqaal aad u qurux badan oo wejiga aadanaha ah. Waa dhisme uumiyaha halkaas ku noolaan kara?
Halkan waxaan ku haynaa shaqo la yiraahdo "Guulihii xagaaga" iyo taariikhda ka bilaabata sanadka 1538. Haddii aan si dhow u eegno waxaan arki karnaa ... Shay duulaya oo aan la aqoonsan? Haddii ay yihiin maraakiib laga keenay meeraha kale iyo haddii kaleba, runta ayaa ah inay u egyihiin muuqaal u eg waxa aan ku fahmayno markabka shisheeye.
Qoys dabaqad dhexe ah, oo ah Coopers, ayaa sawirkan ka qaaday waxyar kadib markii ay u guureen gurigooda cusub. Sawirka ayaa kala diray markii la horumariyey; kaliya waxaad u baahan tahay inaad aragto si aad u fahanto sababta. Qoysku waxay ku qasbanaadeen inay helaan caawinaad nafsi ah muddo dheer, qoyskani aqoon uma laha sawir qaadista, marka ma aysan abuuri karin xiisad ka dhalan karta warbaahinta.
Malaha mid ka mid ah sawirada ugu caansan cirfiidka taariikhda. Qalabaynta Mabel Waxay u tagtay inay ku soo booqato hooyadeed marxuumka qabuuraha, waxay sawir ka soo qaaday ninkeeda oo gaariga ku sugayay. Wuxuu ahaa qof aan hadal haynin markii uu horumarinayo sawirka, wuxuu si dhakhso leh u arkay qof fadhiya kursiga dambe; kamay badnayn kana yarayn hooyadiis dhimatay.
Sawirkani wuxuu leeyahay maro badmaax badan. In kasta oo ay umuuqato sawir caadi ah oo caadi ah, waa dukumenti taariikhi ah oo kiciyay aragtiyo badan, halyeeyo iyo su'aalaha oo dhan. Haddii aadan wali fahmin waxa ka socda muuqaalkan, waa inaad indhahaaga saartid wiilka xiran muraayadaha indhaha. Miyaadan u malayn inay u dhigmayn haba yaraatee bilicsanaanta ay dadka kale xidhaan? Taasi miyaanay u muuqan mid meesha ka baxsan? Si kastaba ha noqotee, waxay si fiican ugu gudbi kartaa wiil jiilkayaga ah. Shaati adag, jaakad, timo qurxoon, muraayadaha indhaha iyo falcelin gacanta ku jirta. Horaa loo yidhi isagu waa safar socotaa. Wiil ku guuleystey inuu u safro waqtigaas waqtiga aan joogno. Waxay umuuqataa mala’awaal saynis, laakiin sawirka lama maamulin waxaana booqday dad badan oo kusugan madxafka Canadian, inkasta oo dhanka kale wax kasta oo uu xirto (dharka, muraayadaha indhaha iyo kuwa kaleba ay si fiican loo abuuri lahaa waqtigaas, laakiin waa waa ka fog tahay isbeddellada intiisa kale).
Freddy Jackson, oo xubin ka ahaa ciidamada qalabka sida, wuxuu ku dhintay shil diyaaradeed intii lagu guda jiray howlihiisa, si kastaba ha ahaatee laba maalmood geeridiisa ka dib wuxuu la soo muuqday saaxiibkiis sawirkan. Ku saabsan yahay sawir kale oo quraafaad ah adduun ka paranormal ka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Sawir » 8-da sawir ee ugu xiisaha badan taariikhda
Waxaa jira walxo badan, marka laga reebo Dayaxa, oo ku wareegaya Dhulka, mana ka hadlayo oo keliya satelite-yada macmalka ah. Waqtigan xaadirka ah dhulku wuxuu leeyahay 6 dayax gacmeedyo la yaqaan, dhowr ka mid ahna muddo tobannaan sano ah ayaa la yaqaanay waxayna leeyihiin magacyo, sida Cruithne (3753 Cruithne). In kasta oo xaaladaha qaarkood aysan ahayn inay ku meeraystaan ​​Dunida, laakiin ay la wadaagaan hareeraha Qorraxda xawaare la mid ah, taasoo siinaysa dareen ah inay ku meeraystaan ​​meeraheenna.
Wejiga caanka ah ee Mars waa tusaale cad oo pareidolia ah. Tani waa isla dhacdooyinka ka dhaca buur gaar ah oo u dhow Segovia, taas oo, laga arkay aag gaar ah, waxay u egtahay naag weyn oo jiifta jiif (wajiga u jeedda). Marka laga hadlayo wajiga ku yaal Mars, waa isku darka farqiga xad dhaafka ah, xagalka iftiinka, qeexitaanka sawir hoose, iwm. Dhawaan ayaa mar labaad lagu sawiray qalab ka fiican, in kasta oo wajiga la dareensiiyay, haddana waa iska caadi abuur dabiici ah.
UFOs ee sawirada qarniyadii dhexe waa kuwa soo noqnoqda, laakiin ma laha qarsoodi ka weyn. xaaladaha badankood, in qaabeynta walxaha (daruuraha, marka laga hadlayo cajaladda aad soo bandhigto). Xaaladaha kale, iyagu waa astaamo gaar ah, sida Flemish orb oo qaarkood ku jahwareeraan Sputnik I.
"Wakhtiga socotada ah" ee aad muujisid wuxuu ahaa mid badan oo laga hadlo, haa, laakiin isagu sidii la moodo ugama yaab badna. Muraayadahaas muraayadaha indha-sarcaadka ah waxay socdeen muddo dheer ka hor inta aan sawirrada la qaadin (tusaale ahaan, Ray-Ban wuxuu sameynayay qaab-dhismeedka Aviator illaa 1936, iyaguna si dhib ah uma badalin tan iyo markaas). Kaamiradu waxay umuuqataa SLR, hubaal, laakiin maahan inay ahaato cillad la'aan. Kaamirooyin isku mid ah ayaa jira, sidoo kale, ilaa Dagaalkii Labaad ee Adduunka ama xitaa ka hor (kuwii Jarmalka ahaa waxay lahaayeen caan badan, sidaa darteed waxay ahaayeen kuwii ay ku isticmaali jireen howlgalladii NASA muddo tobanaan sano ah). Muhiimad weyn ma siin doono habka labiska. Waa wax la yaab leh sida dhar casri ah oo badan oo duug ah u muuqdaan
Marka laga hadlayo cirfiidadka, darbiyada la sudho iyo soo-bandhigiddu waa wax caadi ah, gaar ahaan marka aanad khibrad u lahayn.
Ku jawaab Momar
Subax wanaagsan Momar! Macluumaad xiiso leh. Runtu waxay tahay in dooddu had iyo jeer ahaan doonto mid qarsoon. Waxaan ka arki karnaa aragti shaki leh iyo aragti aad u fara badan oo suurtagal ah. Dhab ahaantii ujeeddada boostada ayaa ahayd in la soo jeediyo fikrad aad u xiiso badan, waana taas runtii, maxaa u diidi waayey dhacdooyin ka baxsada sabab iyo xakamaynta aadanaha? Waad ku mahadsantahay fikirkaaga aad noo reebtay, salaan!